MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » H.E. U Win Myint presented Credentials to the President of Pakistan
by adminmofa on 15/08/2017 at 5:01 PM
U Win Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Islamic Republic of Pakistan, presented his Credentials to His Excellency Mr. Mamnoon Hussain, President of the Islamic Republic of Pakistan on 10 August 2017, in Islamabad.
Dated. 15 August 2017
သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ်
ပါကစ္စတန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အစ္စလာမာဘတ်မြို့၌ ပါကစ္စတန်အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မမ်နွန် ဟူစိန် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်